Ungangitshela ukuthi ngingazitholaphi izindawo zokubuyisela emuva kwekhwalithi kuwebhusayithi yami yezokuvakasha?
Namuhla, kunezindawo eziningi ezihlukene lapho ungathenga khona ama-backlink esemgangathweni kuwebhusayithi yakho - ukuqala kokuthunyelwa kwabavakashi kanye nokuxhumanisa abahlinzeki bokukwakha, ukufaka i-SEO egcwele noma i-Digital Marketing ejensi. Yiqiniso, kunikezwe ukuthi awukwazi ukusetha iwebhusayithi yakho yezokuvakasha ngokwakho. Noma kunjalo, kaningi lawo ma-ejenti nezinkampani, ukungasho ukuthi labo abawazi ukuthi bangayitholaphi imikhiqizo yangemuva ye-backlink ngenani elilinganayo, kungenzeka ukuthi bavame ukukhishwa ngokweqile. Ngisho ukuthi ukunganaki isihloko esiyinhloko sewebsite, futhi mhlawumbe noma iyiphi inkundla yebhizinisi le-intanethi, abaningi babo bazama ukusika amathegi wamanani okwenyuka ngokwezindleko zekhwalithi yabo yesevisi. Yingakho kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi ungayitholaphi izindawo zokubuyisela emuva kwekhwalithi kodwa ukwazi zonke izintambo ukuze uthole ilungelo elifanele lewebhusayithi yakho yezokuvakasha.
Ukubuyela emuva, kufanele sibhekane nayo - izinga lokubuyisela emuva kwekhwalithi kufanele lichazwe njengezixhumanisi nezindawo zangempela kuphela, eziphethe i-PageRank ephezulu kanye negunya lesikhulu, kanye ne-traffic eyanele , isisekelo esiqinile kuma-social media, nokuqukethwe kwekhasi elihle. Ngemuva kwalokho, ngeke sihlangabezane nanoma yiziphi izixhumanisi ze-PBN, akunjalo? Ngaleyo ndlela, ngenzansi ngizokukhombisa lapho uzothenga khona ama-backlink esemgangathweni kuwebhusayithi yakho yezokuvakasha ngezindlela ezintathu ezahlukene - ukubuka imithombo yokuhamba ye-midrange, ukuthatha izinyathelo ezenzelwe izandla, nokuqala ukubhuloza izihambeli kubhulogi ezihamba phambili.
Ukufuna Imithombo Yezokuvakasha I-Midrange
Okokuqala futhi okuphambili, ngiphakamisa indlela yokuthola amawebhusayithi okuhamba nge-midrange, ngoba iphrojekthi yakho yokuhamba iyovame ukulahlwa yizindawo ezinkulu - angeke kwenzeke ukwamukela inkokhelo yakho ngokushintshana kwe-backlink. Ngakho-ke, ngincoma ukuthi ngifuna umthombo we-midrange ohlobene nembonini yezokuvakasha - ngokusebenzisa i-Google ukusesha ulwazi olufanele loxhumana naye, ukuqonda imigomo nemibandela yendawo, sebenzisa ukuthumela lawo "ama-imeyili" abandayo, futhi ekugcineni uthole okuqukethwe kwakho okuthunyelwe ukuba kube i-backlink ngokubuyisela. Ngokuqondene nami, ngasebenzisa uchungechunge lokusesha njengale "sayithi:" okuthunyelwe kwabavakashi "" kulandelwa amagama angukhiye abalulekile. Ungase futhi ufune "ukubhala kithi" futhi uqondiswe ngqo endaweni efanele.
Ukuthatha Izenzo Zezinhlamvu
Ngisho lapha kufanele ulandele isenzo esilula esinjengalokhu. Okokuqala, lungiselela uhlu lwewebhusayithi ozibheka njengento ethandekayo kakhulu kokuthunyelwa kwabavakashi. Okwesibili, gcwalisa ifomu lesicelo bese uthumela umlayezo kumuntu ngamunye othembisayo. Okwesithathu, kuzodingeka uchithe isikhathi esithile ekufundeni konke ukungena nokuphuma kwesevisi ngayinye ehlukene. Phela, uma usufike esiteji, unganqikazi ukwenza ngesibindi - unike i-blogger incazelo ecacile yomzamo wakho wokuthola ama-backlink we-SEO. Ukwenza kanjalo, iningi lababhlogi bayokunika amathegi wamanani abo - kungcono ngokuphathelene nebhizinisi, akunjalo?
Ukuqalisa Ukuvakasha Kwamaminithi ku-Amabhulogi Wokuvakasha
Masibhekane nakho - ngeshwa, akuwona wonke umuntu umlobi omuhle ngokwemvelo. Noma ungase uzizwe ungabi nesikhathi sokuphuma futhi ubhale okuqukethwe okuphezulu kwamabhulogi athile asemthethweni. Uma kufanele kwenzeke kanjalo, isisombululo sakho kuphela ukuthola ezinye izisebenzi eziqashiwe. Yebo, kuzodingeka ukhokhe lokho, kodwa ukuqasha ngisho nomlobi womculi ongayedwa kungaba yinsindiso yangempela kubo bonke abantu abasabheka ukuthi bangayitholaphi imikhakha yangemuva ye-backlink ne-blogging guest. Eqinisweni, ukukhokhela isihloko esikhulu nokuyithumela kubhulogi yokuhamba noma noma yimiphi imithombo ethandekayo embonini yakho kusho ukuthi cishe konke kuzokwenziwa kakade kuwe. Kuleli qophelo, into ekhona esele ekunakekeleni kwakho ngokuqondile ithola ukufinyelela okulungile. Ngaleyo ndlela, ungakhohlwa ukusebenza kahle kuphrofayli yakho yombhalo we-anchor - ugcine umvelo kusukela ekuqaleni nangaphambi kwanoma yini enye Source . Ngikufisela inhlanhla!